Raha vantanina ny resaka, miha dondrona hatrany ny zaza noho ny fahantrana, fandaharam-pianarana tsy mifanaraka amin’ny zava-misy, fanokafana sekoly izay tena gaboraraka tanteraka … Olona tsy manana fahaiza-manao amin’ny resaka fampianarana no lasa miditra amin’izany vokatry ny tsy fisian’ny asa atao. Eo ihany koa ny tsy fahafehezan-tenan’ny mpianatra fa antony lehibe tsy afa-misaraka amin’izao fitotongan’ny fampianarana izao takaitra navelan’ny fanonganam-panjakana sy ny krizy tamin’ny taona 2009. Nijanona ho nofy sisa ny programam-pampandrosoana novolavolaina. Raha tsiahivina ny tantara, efa tamin’ny taona 2006 nisian’ny programam-pampandrosoana Madagasikara Am-Perinasa (MAP) no namolavolana ny programa sy politika hanatsarana miandalana ny fandaharam-pianarana. Naseho voalohany teny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny boky MAP ny 12 novambra 2006, ary voaresaka betsaka tao anatiny ny fanarenana ny fanabeazana, izay antoky ny fampandrosoana satria tsy hisy firenena handroso raha tsy mianatra sy mahay ny olona ao aminy, ary mifanaraka tsara amin’ny filan’ny firenena ny paikady sy ny rafitra hampiasaina. Naongana ny fanjakana tamin’izany, izay efa nahavita ny drafitra matipaika, kanefa 10 taona aty aoriana isika vao hiroso amin’ny MAP ihany. Efa tokony ho dingana hafa no misy antsika ankehitriny ary tsy teo amin’ny lafiny fampianarana fotsiny fa ny fandrosoan’ny firenena mihitsy, raha tsy nisy ny fandrodanana sy ny famotehana. Anatra ho an’ny sisa angamba izao iainana izao.